Adapters & Cables Deals – ICT.com.mm
Targus Dock 414 USB-C 4K HDMI Docking Station (AC1350062)K208,672
Verbatim4in 1 Type C Hub (7 Port Hub)K162,000
Verbatim2Port 20W PD & QC 3.0 USB Charger (White)K48,000
FOOMEE Adaptor Set MF-09 (White)K4,200
Hoco LS25 Digital 3.5 Audio Converter For AppleK18,000
Adapters & Cables Deals
Targus Dock 414 USB-C 4K HDMI Docking Station (AC1350062)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: AC1350062 Connection Technology: USB 3.2 G1 Host Port Compatibility : USB-C Works With: Windows, Mac, Chrome Ethernet: Yes Max Host Power: None Output Voltages: None Power...
Verbatim4in 1 Type C Hub (7 Port Hub)
7 ports in 1 Type C Hub7ports including HDMI, SD & Micro SD Card Reader,2x Type C ports and2x USB 3.0 ports. 1 x...
Verbatim2Port 20W PD & QC 3.0 USB Charger (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 66633 Equipped with Type C PD 3.0 and USB-A QC 3.0 fast charging ports Supports iPhone 20W charging (depends on phone model) With4protection systems...
FOOMEE Adaptor Set MF-09 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: FOOMEE Model: MF-09 Material: ABS+PC Input port: 180-240V60Hz Max 0.3A Output: 5V-1A Interface: 1 USB Adaptor+cable For Type C
Hoco LS25 Digital 3.5 Audio Converter For Apple
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LS25 Lightning to 3.5mm adapter charging current 2A audio converter mic not supported Size: 110*30*8mm; Weight: 20g. Audio plug: 3.5mm interface. Charging port: Lightning interface; charging current...
Verbatim 4-in-1 USB 3.1 Hub with Type C Adaptor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။4x USB-A 3.1 Gen 1 ports with supporting up to 5Gbps data transfer Products dimensions: Hub - 106.9 x 19.6 x 7.5mm, Cable length – about...
Hoco DUP02 In-car Bluetooth Audio Receiver Spring Cable
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Built-in Microphone Telescopic Spring Wire Connect Car Audio Extension Length 1.5m Bluetooth Range : 5m Can turn wired speakers into bluetooth speakers BT Version 5.0 Shell material:...
Hoco U73 Star Galaxy USB To Micro-USB Silicone Charging Data Cable (Yellow)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: U73 Star Galaxy EAN CODE: 6931474713735 Length 1.2m, weight 28g. Support charging and data transmission. Material: silicone. Durable. Wire core specification: 122 four-core enameled wire, OD=3.5mm. Warranty:...
Hoco U73 Star Galaxy USB To Lightning Silicone Charging Data Cable (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: U73 Star Galaxy EAN CODE: 6931474713667 Length 1.2m, weight 28g. Support charging and data transmission. Material: silicone. Durable. Wire core specification: 122 four-core enameled wire, OD=3.5mm. Warranty: 6...
FOOMEE Adaptor Set MA-08 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: FOOMEE Model: MA-08 Material: ABS+PC Input port: 100-240V Output: 5V-2.1A Interface: 1 USB Adaptor+cable For Type-C Warranty: 1 Year
Verbatim Type C 3.1 to HDMI 4K Cable
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 65709 Supports Type C devices output to HDMI devices Plug and play without converters and audio lines HDMI 2.0 and supports max bandwidth up to 18Gbps Supports...
Verbatim4Port 100W PD & QC GaN USB Charger (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 66546 Newest ‘GaN’ technology, smaller size with higher power Equipped with2Type C PD ports and2USB-A QC 3.0 ports Type C PD1 and...
Anitech H114 Adapter Plug USB Charger (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Power status LED USB Indicator LED Fire resistance material Charge tablet and smart phone Surge protection Safety Shutter USB overload protection Adapter divides 02 USB charging ports...
Hoco U73 Star Galaxy USB To Type-C Silicone Charging Data Cable (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: U73 Star Galaxy EAN CODE: 6931474713742 Length 1.2m, weight 28g. Support charging and data transmission. Material: silicone. Durable. Wire core specification: 122 four-core enameled wire, OD=3.5mm. Warranty:...
Hoco U95 Freeway PD 2-In-1 USB/Type-C to Lightning Charging Data Cable (Black)-29
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: U95 Freeway PD EAN CODE: 6931474741493 Length: 1.2m. Weight: 42g. Outer material: woven nylon. Connector material: aluminum alloy. Core: 178 five-core copper wires. Using PD charger Type-C...
FOOMEE Type-C To Lightning Data Cable DN12 (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: Facbric production + Alluminum Alloy Shell Input current: 5V2.4A/9V2A/ 12V1.5A Lenght: 1.2 metre Type-C To Lightning Warranty: 1 Year
Verbatim L-Shaped Lighting to USB-A Cable
Apple MFi certified L-Shaped Lightning connector lets users comfortably hold the phone Compatible with applicable Apple devices Soft fabric braided cable avoids tangling With pure copper wires inside to enhance...
Verbatim HDMI 2.1 10K Cable
Item Code: 66319 Supports video resolution and refresh rates up to 10K Ultra High Speed HDMI features 48Gbps bandwidth With Dynamic HDR and eARC technology VRR reduces stutter for more...
Verbatim4in 1 PD Charging Type-C Hub
Product Dimensions: 63.6 x 37.2 x 7.6mm (L x W x H) Product Weight: 20g Interface Type: USB Type C Ports: Type-C x 1；USB 3.0 x 1；HDMI x 1 ;...
Verbatim 4-in-1 Type C Hub with 120GB SSD
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: 66446 Product Dimensions: 115.4 x 49.6 x 15.3mm Product Weight: 79g Interface Type: USB Type C Ports: Type C PD x 1；USB 3.0 x 2；HDMI x...
Targus DEFCON® T-Lock Serialized Combo Cable Lock
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: AC1350035 Works With: Devices compatible with Noble® Wedgelock® lock slots Color: Black Material: Galvanized Steel Lock Slot Compatibility: Kensington T-Bar Lock Type: Combination Dimensions: 80.00″ x...
FOOMEE Adaptor Set MH-21 (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: FOOMEE Model: MH-21 Material: ABS+PC Input port: 100-240V Output: 5V-2.4A(Max) Interface:2USB Adaptor+cable For Type C Warranty: 1 Year
Anitech H114 Adapter Plug USB Charger (White)
Tenda PoE30G-AT 1000Mbps Gigabit PoE Injector
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ The Tenda PoE30G-AT is the IEEE802.3 AT Gigabit PoE injector, which fully conforms to the standard of wtih 802.3, transmitting power through Ethernet cable, the maximum transmission...